Mmegharị nke ụwa: ntụgharị, ntụgharị, precession na nutation | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe anyị na-ekwu maka ngagharị nke ụwa n'ime nke anyị Usoro anyanwụ Mgbaghari na ntụgharị asụsụ na-abata n'uche. Ha bụ mmegharị abụọ a kacha mara amara. Otu n’ime ha bụ na ọ kpatara ehihie na abalị na ihe ndị ọzọ na-akpata oge a na-enwe n’afọ. Ma mmegharị ndị a abụghị naanị ndị dị adị. Enwekwara mmeghari ndi ozo di nkpa ma amaghi nke oma ọ bụ utịp na precession ije.
N’isiokwu a anyị ga-ekwu maka mmegharị anọ ụwa anyị nwere n’elu Sun na mkpa ọ bụla n’ime ha. You chọrọ ịmatakwu banyere ya? Naanị ị ga-anọgide na-agụ ihe.
1 Mgbagharị ntụgharị
2 Ntughari ntụgharị
2.1 Aphelion na perihelion
3 Mwepu mgbochi
4 Mmegharị mmegharị
Nke a bụ usoro a kacha mara amara tinyere nsụgharị. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ akụkụ dị mkpa ịmaghị banyere ya. Mana ọ dịghị mkpa, n’ihi na anyị ga-agafe ha niile. Anyi na-amalite site na ichoputa ihe mmeghari a bu. Ọ bụ maka ntụgharị nke thewa nwere na mpaghara nke ya na mpaghara ọdịda anyanwụ ma ọ bụ Ọwụwa anyanwụ. Ọ na-ewere dị ka mgbochi klookwaisi. Goeswa na-agagharị onwe ya ma ọ na-ewe nkezi nke 23 awa, 56 nkeji na 4 sekọnd.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, n'ihi ngagharị a na-enwe ehihie na abalị. Nke a na eme n'ihi na Anyanwụ nọ n'ọnọdụ kwụ ọtọ ma na-enwusi ihu nke ụwa dị n'ihu ya. Akụkụ ọzọ ga-agba ọchịchịrị ma ọ ga-abụ abalị. A pụkwara ịhụ mmetụta a n'ehihie, na-eleba anya na ndò mgbe awa gachara. Anyị nwere ike ịghọta maka ụwa mgbe ọ na-agagharị na-eme ka onyinyo ahụ dịrị ebe ndị ọzọ.
Ihe ọzọ na-esi na ntụgharị usoro a dị mkpa bụ ịmepụta oghere magnetik. Ekele maka oghere magnet a anyị nwere ike ịnwe ndụ n'elu ụwa yana nchedo na-aga n'ihu site na radieshon sitere na ikuku anyanwụ. Ọ na-emekwa ka ndụ dị n’elu ụwa dịrị na mbara ikuku.
Ọ bụrụ na anyị eburu n'uche ọnọdụ dị n'akụkụ ọ bụla nke ụwa, ọsọ ọ na-agbagharị abụghị otu n'akụkụ niile. Ọ bụrụ na anyị atụlee ọsọ ọsọ site na akara kere ụwa ma ọ bụ na okporo osisi ọ ga-adị iche. Na ekwuo, ọ ga-aga njem dị anya iji gbanye ya axis na ọ ga-aga na a ọsọ nke 1600 km / h. Ọ bụrụ na anyị ahọrọ otu isi na 45 ogo ugwu ugwu, anyị nwere ike ịhụ na ọ na-agbagharị na 1073 km / h.
Anyị na-aga n'ihu ịtụle usoro ihe mgbagwoju anya nke ụwa. Ọ bụ ngagharị nke haswa nwere nke mejupụtara ịmegharị gburugburu gburugburu Sun.Oke a na-akọwa ngagharị elliptical ma na-akpata na n'ọnọdụ ndị dị nso na Sun na oge ndị ọzọ gafere.
Ekwenyere na n'oge ọnwa ọkọchị na-ekpo ọkụ karị maka na mbara ụwa dị nso na Sun ma gafee ọzọ n’oge oyi. Ọ bụ ihe nwere ike ime ka anyị chee echiche, ebe ọ bụrụ na anyị gara n'ihu, obere ọkụ ga-erute anyị karịa ma ọ bụrụ na anyị nọ nso. Otú ọ dị, ọ bụ nnọọ ndị na-abụghị. N'oge ọkọchị, anyị na-esite na Sun karịa oge oyi. Ihe na-ekpebi n'oge nke oge ga-anọchi anya abụghị ogologo ụwa ma elekere Anyanwụ kama ọ na-eche maka ụzarị anyanwụ. N'oge oyi, ụzarị anyanwụ na-abịa na mbara ala anyị n'ụzọ nwere mmasị karị ma n'oge ọkọchị karịa n'akụkụ ụfọdụ. Nke a bụ ihe kpatara enwere ọtụtụ awa na anwụ n'oge ọkọchị na oke okpomọkụ.
Ọ na-ewe 365wa 5, 48 awa, 45 nkeji na sekọnd XNUMX iji mee ka otu mgbanwe zuru oke na ntụgharị nke ntụgharị ya. Ya mere, afọ anọ ọ bụla anyị nwere afọ itolu na nke Febụwarị nwere otu ụbọchị. Emere nke a ka ịhazie usoro ihe omume ma debe ya oge niile.
Bitwa okirikiri gbasara Anyanwụ nwere gburugburu 938 nde kilomita ma nọrọ na nkezi nke 150 kilomita site na ya. Oge anyị na-agba bụ 000 km / h. N'agbanyeghị ịbụ oke ọsọ, anyị anaghị ekele ya maka ike ndọda ụwa.
Aphelion na perihelion
Pathzọ ụwa anyị na-eme tupu Anyanwụ a na-akpọ ecliptic na-agabigakwa n’elu akwara n’elu mmalite oge opupu ihe ubi na ọdịda. A na-akpọ ha ndị equinoxes. Na ọnọdụ a, ehihie na abalị ka otu. N'ebe kachasị anya site na ecliptic anyị na-ahụ ndaeyo solstice na oyi. N’oge ndị a, ụbọchị na-adị ogologo karịa ma abalị dị mkpụmkpụ (n’oge ọkọchị) ma n’abalị ahụ dịkarịsịrị ụbọchị pere mpe karịa (n’oge oyi) N’oge a, ụzarị anyanwụ na-ada n’ụzọ kwụ ọtọ n’otu mpaghara ugwu ahụ, na-eme ka ọ kpookwuo ọkụ. N'ihi ya, mgbe ọ dị n'ebe ugwu ụwa ọ bụ oge oyi na ndịda ọ bụ oge ọkọchị na ntụgharị ihu.
Ntụgharị asụsụ nke ụwa n’elu Anyanwụ nwere oge mgbe ọ kacha dị anya akpọrọ Aphelion na ọ na-eme n’ọnwa Julaị. N’aka ozo, ebe kachasi nso n’uwa rue Anyanwu bu Pihelion ma dikwa n’onwa Jenuari.
Ọ bụ nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ ewepụ ụwa n'uwa. A na-akpọ mmegharị a precession nke ụwa ma ọ bụ kpatara oge ike nke usoro ụwa-Sun kpaliri. Ntughari a na emetuta udiri oriọna nke anyanwu iru n'elu uwa. Ugbu a axis nwere ọchịchọ nke 23,43 ogo.
Nke a na-agwa anyị na ntụgharị ụwa adịghị atụ na-atụ otu kpakpando ahụ (Pole) mgbe niile, kama ọ na-agbagharị n'otu ụzọ elekere, na-eme ka towa na-agagharị na mmegharị nke yiri nke elu igwe. Ntughari zuru oke na uzo mbu na-ewe ihe ruru 25.700 afọ, ya mere, obughi ihe kwesiri ntukwasi obi n'aru mmadu. Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị ejiri ihe atụ geological oge anyị pụrụ ịhụ na o nwere nnukwu mkpa na oge nke glaciation.
Nke a bụ nke ikpeazụ nke ikpeazụ ụwa anyị nwere. Ọ bụ obere mmegharị na anaghị emegharị emegharị nke na-eme na ntụgharị nke ntụgharị nke ihe niile na-emegharị na-agagharị na ya. Were gyros na spinning n'elu, dịka ọmụmaatụ.
Ọ bụrụ na anyị nyochaa Earth, a nutation ije bụ kwa oge oscillation nke axis nke adiana gburugburu ya nkezi ọnọdụ na mbara igwe. Nke a na ngagharị emee na ihe kpatara ike nke ike ndọda nke ụwa na mma n'etiti ọnwa, Sun na Earth.
Obere ngbanwe a nke ụwa na-eme site na ntoputa nke ikuku na ọnwa. Oge nri bụ afọ 18.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịghọta mmegharị nke ụwa anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Mmeghari ụwa: ntụgharị, ntụgharị, precession na nutation